त्रिवि उपकुलपतिमा डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा नियुक्त - १७ कार्तिक २०७६, NepalTimes
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीले आइतबार त्रिविको १९ औं उपकुलपतिमा बाँस्कोटालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो, ‘बास्कोटालाई उपकुलपति नियुक्ति गर्ने निर्णय भयो,सोमबार नियुक्ति पत्र बुझेर पदवहाली हुन्छ ।’ बाँस्कोटा नाक, कान, घाँटीका विशेषज्ञ डाक्टर हुन् । उनले नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्षबाट हालै अवकाश पाएका थिए । उनी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका निजी चिकित्सक समेत हुन् ।